TakCoin စျေး - အွန်လိုင်း TAK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို TakCoin (TAK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ TakCoin (TAK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ TakCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
TAK – TakCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ TakCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
TakCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TakCoinTAK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000007TakCoinTAK သို့ ယူရိုEUR€0.000006TakCoinTAK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000005TakCoinTAK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000006TakCoinTAK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00006TakCoinTAK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00004TakCoinTAK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000145TakCoinTAK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00002TakCoinTAK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000009TakCoinTAK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000009TakCoinTAK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000147TakCoinTAK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00005TakCoinTAK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00003TakCoinTAK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.000493TakCoinTAK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00111TakCoinTAK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000009TakCoinTAK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00001TakCoinTAK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.000205TakCoinTAK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00005TakCoinTAK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.000696TakCoinTAK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.00781TakCoinTAK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.00255TakCoinTAK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.000481TakCoinTAK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000182
TakCoinTAK သို့ BitcoinBTC0.0000000006 TakCoinTAK သို့ EthereumETH0.00000002 TakCoinTAK သို့ LitecoinLTC0.0000001 TakCoinTAK သို့ DigitalCashDASH0.00000007 TakCoinTAK သို့ MoneroXMR0.00000007 TakCoinTAK သို့ NxtNXT0.000528 TakCoinTAK သို့ Ethereum ClassicETC0.0000009 TakCoinTAK သို့ DogecoinDOGE0.00182 TakCoinTAK သို့ ZCashZEC0.00000007 TakCoinTAK သို့ BitsharesBTS0.000251 TakCoinTAK သို့ DigiByteDGB0.000254 TakCoinTAK သို့ RippleXRP0.00002 TakCoinTAK သို့ BitcoinDarkBTCD0.0000002 TakCoinTAK သို့ PeerCoinPPC0.00002 TakCoinTAK သို့ CraigsCoinCRAIG0.00297 TakCoinTAK သို့ BitstakeXBS0.000278 TakCoinTAK သို့ PayCoinXPY0.000114 TakCoinTAK သို့ ProsperCoinPRC0.000818 TakCoinTAK သို့ YbCoinYBC0.000000004 TakCoinTAK သို့ DarkKushDANK0.00209 TakCoinTAK သို့ GiveCoinGIVE0.0141 TakCoinTAK သို့ KoboCoinKOBO0.00143 TakCoinTAK သို့ DarkTokenDT0.000006 TakCoinTAK သို့ CETUS CoinCETI0.0188
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 19:25:02 +0000.